कथा : ‘त्यो’ सामान « रिपोर्टर्स नेपाल
कथा : ‘त्यो’ सामान
लव गाउँले : सुजिता डङ्गोललाई क्लास नसकुन्जेल सकसक भइरह्यो । ऊ दुई-तीन पटक शौचालय गइसकेकी थिई । फेरि सरलाई सोध्न लाजमर्दो हुन्थ्यो । त्यसमाथि केटाहरू हाँस्न सक्थे । ऊ कहिले किताबको पाना पल्टाउँथी त कहिले कापीमा केही लेख्थी । कहिले भने हात कम्मर मुनिसम्म पुर्‍याउन खोज्थी तर रोकिन्थी ।
सँगै बस्ने उसको साथी जस्को बिहा भैसकेको थियो सानै उमेरमा, कल्पना घिमिरे— लाई थाहा थियो सुजितालाई के भइरहेछ ! उनलाई सुजिताले बिहान क्यान्टिनमा आफ्नो कुरा भनेकी थिई चिया समयमा । पिरियड सकिएको घण्टी लाग्नेबित्तिक्कै ऊ उठेर हतार हतार शौचालय गई र दुवै हातले खोस्य्राक खोस्य्राक आवाज निस्कने गरी कनाउन थाली ।
हिजो विदाको दिन । उसले घरको काम सकी । पढाइको गृहकार्य सिध्याई । सरसफाई गरी तर समय डल्लै बाँकी रहिरह्यो । यो समयमा के गर्ने ! फेसबुक कति हेर्नु ! मेसेज कति पठाउनु ! नेपाल टेलिकमको पन्ध्र रुपैयाँको असीमित डे प्याक भ्वाइस मेल सुविधाबाट साथीहरूसाग फोनमा कति कुरा गर्नु !
आमा बुवाहरू भरे बेलुकीलाई तरकारी पनि ल्याउने भन्दै सजिसजाउ भएर बजार घुम्न निस्किए । भाइ अगि नै फुटसल खेल्न जान्छु भनेर हिँडिसकेको थियो । माइती आएकी दिदी पाँचवर्षे छोरो च्यापेर निदाइरहेकी थिइन् । निरुद्देश्य कोठामा यताउति गर्दागर्दै उसले ढोका बन्द गरेर चुकुल लगाई । ड्रेसिङ टेबुल अगाडिको आरामदायी कुर्सीमा बसी ।
एकपटक आफ्नो अनुहारलाई गजबसित हेर्दे आँखा छातीतिर पुर्‍याई । दुवै हातले सुमसुम्याउँदै लामो सास तानेपछि जुरुक्क उठी । आएर ड्रेसिङ टेबुलमाथि झोलाबाट उसले सामानहरू खन्याई् । रेजर । सेभिङ फोम । एन्टिसेप्टिक झोल । सर्जिकल ग्लोब । आफ्टर सेभ क्रिम । सफा स्पोञ्ज । सानो रियुजेबल प्लास्टिक कचौरा र एउटा ह्याण्डी ऐना । छेउमा पानी भएको सिसाको जग त छँदै थियो । उसले सर्जिकल ग्लोब लगाई । जगबाट कचौरामा पानी राखी ।
वरिपरि सेभिङ फोम दली र केही बेर हेरिरही । फोमको चिसो मध्यकेन्द्र हुँदै मस्तिष्कसम्म पुग्यो । रेजर समातेर ‘माथि’बाट तल र ‘तल’बाट माथि गरी । कचौरामा रेजर टकटक्याएर देब्रे हातको बुढीऔँला र चोरीऔँलाले ‘भी’ आकारमा ‘च्यापेर’ वरिपरि र दाँया बाँया रेजर चलाई । फोम पानीमा चोपेर निचोरी र सफासँग ‘पुछी’ । एन्टिसेप्टिक हातमा लिएर ‘दल्दा’ एकछिनसम्म चहराइरह्यो । अनि आफ्टर सेभ ‘दली’ र सामानहरू थन्काई । केही हलुका भएजस्तो लाग्यो उस्लाई । कौसीमा गएर हेरी— घाम डाँडामाथि मुन्टो अड्याएर मुस्कुराइरहेथ्यो ।
ऊ कलेजबाट फर्कनेबित्तिकै कोठाको ढोका ढप्क्याएर चुकुल लगाई । किताबको झोला बेडतिर फालेर कलेज युनिफर्ममै बाथरुम पसी । मान्छे साइजको ठूलो ऐना सामु उभिएर फ्रक माथि फर्काएर च्यापु र छातीले च्यापी । भित्री वस्त्र तल सारी । ‘हुँ…’ बेस्सरी कन्याएकोले होला वरिपरि राता डाबरबीच ‘भुक्क उक्सिएको’ देखियो । लाजको सुरमा भित्री वस्त्र तान्न बिर्सेर दुवै हातले आँखा छोप्न पुगी । अन्तत: एक हातले कट्टु तानी । कोठासम्म आइपुग्दा उसका अनुहार र कान हल्का तातोले राता देखिए । शरीरभित्र रगत छिटोछिटो दौडिरहेको लाग्यो । उसले केही पनि सोच्न सकिन । एकछिन विचारशून्य भई । गएर बेडमा बसी ।
भित्तामा अभिनेता सलमानको फोटो थियो । पुष्ट मशलले भरिएको पाखुरा र छाती भएको । ऊ आफैलाई थाहा नहुने गरी उसको हात आफ्नो छातीमा पुग्यो । उसलाई के लाग्यो कुन्नि ? दुवै हात बाँधेर एकछिनसम्म थिचिरही । सधैँ झैँ घाम अस्तायो । आमाबाबु तरकारी बोकेर आइपुगे । फुटसल खेल्न गएको भाइ पनि आइपुग्यो । चिया नास्ता तयार गर्न ऊ किचनतिर उक्ली । उस्को दायाँ हात चियापत्ती, चिनी, दूध हालेको भाँडोतिर हुन्थ्यो भने अर्को हात भुँडी मुन्तिर । यसरी हात चलाउँदा ऊ घरीघरी ढोकातिर पनि आँखा दौडाउँथी ।
चिया नास्ता दिइसकेपछि भात भान्सा तयार गरी । सबैलाई ख्वाएर आफू पनि खाई । सरसफाई गरेर र कोठामा गई । सुजिताको घरको विशेषता के थियो भने उसको घरको चारै दिशामा अरु घरहरू पनि थिए तर त्यसबाट बाधा पुग्दैनथ्यो । काठमाडौँको रैथाने बाउले वरिपरि प्रशस्त जग्गा छोडेर घर बनाएकाले बतास छेकिँदैनथ्यो र घाम पनि छेकिन्नथ्यो । जाडोमा घाम र गर्मीमा हावा मजाले आउँथ्यो ।
उसको कोठा सामुन्नेको कोठामा भर्खरै एकजना चालीस पूर्वार्द्धका मान्छे भाडामा बस्न आएका थिए । छिमेकी घरमा । सायद टिचर थिए । उनलाई फाट्टफुट्ट देख्दा किताबसँग भिडिरहेका देखिन्थे भने कहिलेकाहिँ ल्यापटप चलाइरहेका । उनीसँग सुजिताको दोहोरो आँखा ठोक्किएको थिएन । कलेजमा टिचर ढिलो आउँदा केटाहरू कहिलेकाहीँ छिल्लिएका कुरा गर्थे, आफू आफूबीच केटीहरूतिर नहेरी । कहिले साइवर सेक्सको कुरा गर्थे । कहिले मास्टरबेसनको । अनि एनल सेक्स पनि । यो सुनेपछि सुजाता अलमलिन्थी । उसले सेक्स सुनेकी छ तर साइबर सेक्स के हो, थाहा छैन ।
अनि मास्टरबेसन ? त्यो पनि थाहा छैन । एनल सेक्स कसरी हुन्छ ? त्यो झन् अप्ठेरो लाग्यो । ऊ घर आई । घरधन्दा सकेर बेडमा पल्टी । पातलो ब्लाङ्केट ओडेर हात मध्यभागतिर चलाउँदै सोच्न थाली— यो के होला केटाहरूले गरेका कुरा । उसले साइबर क्राइम पनि सुनेकी हो तर के हुँदा क्राइम हुन्छ, त्यो पनि थाहा भएन ।
उसले कोल्टे परेर झ्यालबाट हेरी । पल्लो कोठाका सबै झ्यालहरू खुल्ला थिए र बत्ती झलमल थियो । कथित टिचर देखिँदैनथ्यो । हेर्दाहेर्दै टिचर टावेल बेरेर कोठामा पस्यो । उसले जिउमा के के क्रिमहरू दल्यो । ऊतिर फर्किएको ल्यापटप ऊ आफू छेकिएर सुजितातिर फर्कायो । स्क्रिनमा कालो केटा र गोरी केटी यौनक्रिडा गरिरहेका देखिए । सुजाता आँखा छोपेर यता फर्किई । उसको जिउ एकछिनसम्म रननन्न गरिरह्यो ।
कलेजमा उसले कल्पनालाई ल्यापटप ऊतिर फर्काएको कुरा सुनाई । कल्पना भित्रभित्रै ल्यापटप दृश्यको त्यो कल्पनाले अराजक भए पनि उसले बनावटी गाली गरी— ‘मर्न नसकेको मोरो, कति मात्तेको होला ! अनि तेसपछि फेरि त्यता फर्किएनौ ? त्यो बजिया के गरिरहेको थियो, थाहा पाइन्थ्यो नि !’
कल्पनाभित्र सुजाताको छिमेकीको कोठाको त्यो माहौल एउटा सकसक बनेर दौडिरहेको थियो । ‘अहा ! मैले त तेसपछि तेता फर्किने आँट गर्नै सकिन नि ।’
‘हेरेको भए हुने, तिमीलाई तेसले देख्दैनथ्यो । उसले केके गर्दै थियो, तिमीले थाहा पाउँथ्यौ नि ।’ कल्पना त्यै कोठाभित्रको सम्पूर्ण दृश्य आफ्नो मनमा खेलाउन आतुर देखिन्थी ।
‘खै कल्पना !’
त्यसपछि सुजिता मौन भई । प्रत्येक अन्तरालमा उनीहरूबीच प्रायः यही विषयमाथि कुराकानी भइरह्यो । आजको कलेज सकियो । सुजिता घर आई । घरको काम सक्दावर्दा घाम उही डाँडामाथि पुगिसकेको थियो । सधैँ झैँ बाआमा तरकारी बोकेर आए । भाइ फुटसल खेलिसकेर आयो । उसले चिया नास्ता दिइसकेपछि भात भान्छा तयार गरी । सबैले खाए । उसले पनि खाई र भान्छाको सरसफाई सकेर ऊ कोठामा आई । कोठामा टिभी अन नै छोडेकी रहिछ । च्यानल चेन्ज गरेर समाचार हेरी । एकछिनपछि थकाई लागेजस्तो भयो । टिभी बन्द गरी र बेडमा गई ।
आज पनि हालत उही थियो । ब्लाङ्केटभित्रबाट उसको हात उही मध्यभागतिरै चलिरहेको थियो । नहेरुँ भन्दाभन्दै उसको आँखा फ्याट्ट पल्लो झ्यालमा पुग्यो । झलमल्ल कोठामा टावेल बेरेर उही मनुवाको प्रवेश भयो । सायद उसलाई थाहा हुनुपर्थ्र्यो सुजाताको बेडमा आउने समय यही हो भनेर । ऊ केके गर्दै थियो । टावेल लफ्रक्क भुइँमा झर्यो । टावेल डेलिबरेट्ली उसले झारेको हुन सक्थ्यो ।
‘यो मा ̃….! कत्रो लम्रङ्ग….!’
सुजिता आत्तिएर आँखा चिम्म गदै तकियामा घोप्टो परी । उस्को मुटु बेतोडले चल्यो । उसको थिचिएको छाती जुरुकजुरुक उचालियो । केहीबेर पछि ऊ सम्हालिँदै उठी र गएर एक गिलास चिसो पानी घट्घट् पिई । यो मोरो राँडो रहेछ । स्वास्नी मरेको छ महिना भएको भन्थिन्, बिहान दूध लिन जाँदा त्यही घरमा काम गर्ने कान्छी दिदीले ।
सुजिताले झोलाबाट ल्यापटपबाट निकाली । ऊ ल्यापटपमा जीवनको पहिलो अफ दि रोड ड्राइव गर्न थाली । गुगल सर्च गर्दै उसले साइवर सेक्स, मास्टरबेसनबारे थाहा पाई । एनल सेक्स हेरी । ऊ गुगलबाटै के के ब्राउज गर्दै गई । पर्सिपल्ट मेनगेटको घन्टी बज्यो । एउटी केटी हातमा एउटा प्याकेट बोकेर उभिरहेकी देखिई । सुजिता खुरुरुर्र दौडेर तल पुगी र मान्छे मात्र प्रवेश गर्ने सानो ढोका खोली । केटीले भनी— ‘तपाईंको अर्डरको सामान डेलिभरी गर्न आएको ।’
सुजितालाई यसअघि नै मोबाइलमा सूचना आइसकेको थियो । सुजिताले सोधी— ‘साइज अर्डर अनुसारकै हो नि ?’ ‘आठ इन्च परफेक्ट छ ।’ केटीले भनी ।
‘अनि एक्सेसरिज ?’
‘सबै छन् । सर्जिकल ग्लोब्स् । एक्स्ट्रा बेट्री । लुब्रिकेन्ट जेल । टिस्यु र एन्टिसेप्टिक जेल !’
प्याकेट लिएर सुजिताले पैसा दिई । केटी गई । सुजिता घरभित्र छिरी । एकछिनपछि बाथरुमबाट चरमसुख प्राप्तिको चर्को आवाज आइरहेको थियो । 
सवारी खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्ममा कडाइ
काठमाडौं, कार्तिक ९ । अनावश्यक खर्च घटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खर्च
काठमाडौं, कार्तिक ९ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न